अब लाइसेन्स लिन बारम्बार धाइरहनुनपर्ने, होम डेलिभरी हुने ! – Hamrosandesh.com
अब लाइसेन्स लिन बारम्बार धाइरहनुनपर्ने, होम डेलिभरी हुने !
सरकारले घरमै चालक अनुमतिपत्र(स्मार्ट लाइसेन्स) उपलब्ध गराउने भएको छ। यो व्यवस्थासँगै अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न बारम्बार धाइरहनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुनेछ। यातायात व्यवस्था कार्यालय काठमाडौंले अनुमतिपत्र होम डेलिभरी गर्ने सेवा उपलब्ध गराउन लागेको हो। यो समाचार आजको अन्नपूर्णपोस्टमा प्रकाशित छ।